लिम्वूवान - अन्तर्वार्ताहरु: राजनिती कर्मी मान बहादुर थोप्रासंगको अन्तरवार्ता
राजनिती कर्मी मान बहादुर थोप्रासंगको अन्तरवार्ता
बि.सं.२०२२ फागुन ८ गते ताप्लेजुङ जिल्लाको ढुङगे साँघु गा.वि.स. वडा नं.७ तेम्वेमा जन्मनु भएका मान बहादुर थोप्राको वाल्य जीवन मात्र नभएर माध्यमिक विद्यालय नसकुन्जेल सम्म तेम्वे मै आफ्नो समय विताउँनु भएको थियो । पञ्चायतको डर लाग्दो समयमा पनि ज्यानको बाजी राखेर विद्यार्थी काल मै अनेरास्वयु ताप्लेजुङ जि.क.सदस्य,क्षेत्रिय कमिटी सहसचिव,स्ववियु सचिव सम्मको कार्यभार सम्हाली सक्नु भएको छ । त्यति मात्र नभएर ३५,३६ सालतिर ताप्लेजुङ जिल्ला मै आमहड्तालमा प्रत्यक्ष सहभागी जनाउँनु भएको थियो। धरान बहुमुखी क्याम्पसबाट स्नातक तह अध्यायनको क्रममा सक्रियरुपले विद्यार्थी राजनितिमा नलागे पनि कम्युनिष्ट विचारधारामा नै समर्थन रहदै आएको थियो । विद्यार्थी कालमा विरेन्द्र सिल्डमा दौड तर्फ तेस्रो र वाक्तृत्वकलामा पनि तेस्रो स्थान प्राप्त गर्नु भएको थियो। लामो समय वैदेशिक राजगारको लागि जापान र त्यसपछि हाल हङकङ बसोवास गर्दै आउनु भएका मान बहादुर थोप्रा हाल लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चा हङकङको सचिव जस्तो गरिमामय पदमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ । उनै कुसल राजनिती कर्मीसंग लिम्बुवान ब्लगर टंक सम्वाहाम्फेले गरेको कुराकानीको अंश पाठकहरुको लागि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
१.हङकङ जस्तो व्यस्त ठाउँमा रहेर पनि राजनैतिक गतिविधिमा संलग्न हुनु भएको छ यो कसरी सम्भव भएको छ होला अथवा समय कसरी मिलाई रहनु भएको छ ?
पहिलो कुरा त मानिसमा र्इच्छाशक्ती हुनुपर्यो । चाहे राजनैतिक होस् वा आर्थिक,धार्मिक वा कुनै प्रवृतिको कार्य किन नहोस् । ति सवै आफ्नो र्इच्छाशक्तीले निर्देशन गर्ने भएको हुनाले मेरो जीवनमा पनि राजनिति प्रतिको झुकाव वा समय पनि त्यहि शक्तीले बिशेष महत्व राख्दछ । तर्सथ मैले पनि यस हङकङको ब्यस्त समयका बावजूद घरपविार,समाज,इष्टमित्र,आफ्नो रोजगार लगायत सम्पूर्ण कुराको उपयुक्त समयको संयोजन गर्दै मेरो प्रमुख उदेश्य राजनैतिक जीवनलाई त्यहि अनुरुप समय मिलाई यस गतिविधिमा अगाडी बढीरहेको छ ।
२.तपाई के विद्यार्थीकालमा पनि राजनैतिक गतिविधिमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो ?
निश्चय नै म विद्यार्थीकाल देखिनै कम्यूनिष्ट बिचारधाराको राजनैतिक गतिविधिमा संलग्न थिए । तर त्यस वेलाको मेरो राजनैतिक बुझाई काँचो थियो । मैले कुनै राजनैतिक सिद्धान्तको बिश्लेषण गर्न सकेको थिइन । तथापि हाल आएर बिद्यार्थी जीवनको मेरो संलग्नताको निति उचित लागिरहेछ । किनकी हाम्रो नेपालमा आर्थिक हिसाबले हेर्ने हो भने यति डर लाग्दा खाल्डाहरु छन् । जहाँ एकछाक खान नपाउँने नेपाली देखि जहिले तहिले मोजै मोज गरेर जीवनयापन गर्नेहरु पनि छन् । त्यस्तै सामाजिक रुपले यति धेरै असमान र बिभेदहरु छन् । जुन भगवान देखि पशुसम्मको हाम्रै नेपालीहरुमा कायम छ । अन्य धार्मिक,संस्कृतिक आदि इत्यादिमा पनि बिरक्त लाग्दो अवस्थाहरु छन् । अझ राजनैतिक अधिकारको त कुरै छाडौं । यहाँ हामीले समस्या त देख्यौं तर ती समस्याको समाधान त्यति सरल छैन । सामान्य सुधार,सामान्य सहयोग र सस्तो धनले मात्र यी असमान खाल्डोहरु पुर्न र चिर्न सम्भव छैन । तसर्थ यी खाल्डाहरुव पुर्नको लागि हामीले उचित दर्शन विज्ञान वा समय सापेक्ष अनुरुपको नितिले मात्र सम्भव हुन सक्छ । यस्ता यी सम्पूर्ण कुराहरुको निरुपण गर्ने एक मात्र मार्क्सवादी दर्शन हो । अन्य राजनैतिक दर्शनबाट यी कुराहरु पुरा हुन नसक्ने भएकोले भएको हुनाले म विद्यार्थीकाल देखि हाल सम्म यहि बिचारधारामा समर्पित हुदै आइरहेको छु ।
३.राजनैतिक गतिविधि बाहेक तपाईले के के विषयबस्तुमा बढी चाख लिनु हुन्छ ?
प्रमुख मेरो चासो राजनिति नै हो । तर राजनिति भन्दैमा त्यस्तो बुर्जुवा राजनिति होइन । सच्चा राष्ट्रप्रेमी,जनता प्रेमी,आफ्नो जन्मभूमि नेपाली पहिचान र नेपालको गौरवतालाई डोर्याउन सक्ने सच्चा राष्ट्रवादी राजनिति नै मेरो प्रमुख चासो हो । जहाँ सम्म राजनिति बाहेक अन्य कुराको सवाल छ त्यसमा गौरव नेपाल बनाउनको लागि वा गौरवशाली नेपाली बन्नको लागि मैले मेरो औकात र पहुँचले भ्याए सम्म राजनैतिक,आर्थिक,शैक्षिक,भाषीक,संस्कृतिक वा लैङगीक बिकास र उत्थानको लागि तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुमा सहयोग गरि समाजसेवा गर्दै कहिं न कतै बिकासका २,४वटा इट्टा थपेरै जाने मेरो इच्छा हुनेछ ।
४.तपाई लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चा हङकङ प्रवास समितिको सचिव जस्तो गरीमामय पदमा हुनुहुन्छ यस पदलाई कसरी निभाई रहनु भएको छ ?
हो म लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चा हङकङ प्रवास समितिको सचिव जस्तो गरीमामय पदमा कार्यरत छु । मेरो यो सचिव पदको जिम्मेवारीलाई कर्तब्यका साथ निभाई रहेको छु । खासै सजिलो पनि छैन किनकी म एक नया राजनैतिक विद्यार्थी भएको हुनाले मैले धेरै जान्न सिक्न बाँकी नै छ र यो क्रम निरन्तर चलिरहेछ । जसमा म सकारात्मक नै छु । र खासै असजिलो पनि छैन किनकी हाम्रो कमिटी एउटा राम्रै पृष्ठभूमिमा जन्मेको मोर्चा भएकोले आवश्यक वौद्धिक साधन,वौद्धिक खुराक देखि वौद्धिक ब्यक्तित्वहरु यस कमिटीमा भएको हुनाले हरेक पक्षमा सहयोग समन्वय निरन्तर चलिरहने भएकोले मेरो क्षमताले भ्याए सम्म बडो उत्साहका साथ मेरो जिम्मेवारीलाई कर्तब्य ठानी निर्बाह गर्ने प्रयत्न गरीरहेको छु ।
५.प्रवासमा लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चा हङकङ प्रवास समितिको अवधारणा कसरी आयो होला ?यसरी प्रवासमा राजनैतिक संगठन खोल्नुको प्रमुख उद्देश्य के होला ?
प्रवास हङकङमा लिम्बुजातिहरुको पनि राम्रै संख्या भएकोले साथै लिम्बु जातिहरु नेपालका जातिहरु मध्ये उत्पीडीत आदिवासी जाति पनि हो । हिजो सम्म र्सवसम्पन्न लिम्बुवान र लिम्बुजातिहरु हाल आएर चरम उत्पीडनमा पर्नुको पछाडी यहाँ ठुल्ठुला षड्यान्त्रका पर्खालहरु तेर्स्याइएका छन् । यी षड्यान्त्रका पर्खाललाई ढाल्नको लागि वा भत्काउनको लागि २,४ जना लिम्बु र लिम्बुवानीहरुबाट मात्र सम्भव छैन । तर्सथ नेपालका तमाम लिम्बुवानवासी लिम्बुवानीहरु देखि प्रवासमा रहेका लिम्वु तथा लिम्बुवानीहरुले आआफ्नो पक्ष र क्षेत्रबाट आफ्नो क्षमता र औकातले भ्याए सम्म सबै तवरले एक ढिक्का भएर उत्पति भएको त्यो भयानक शक्तिले मात्र त्यो षड्यान्त्रको पर्खाल ध्वस्त पार्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो । त्यसैको परिणाम स्वरुप प्रवास हङकङमा पनि शसक्तका साथ यस मोर्चाको जन्म भएको हो । यसको प्रमुख उद्देश्य पनि पहिले कै राजनैतिक अधिकार देखि सम्पूर्ण अधिकारहरु फिर्ता गरार्इ स्वायत लिम्बुवान प्राप्ति गर्नु नै हो ।
६.हाल यस संगठन वा मोर्चाले हङकङमा कस्तो गतिविधि सञ्चालन गरीरहेको छ ?
यस मोर्चाले स्थापना काल देखि नै हाल सम्म निरन्तर जातिय अस्तित्व,जातिय पहिचान र जातिय राजनैतिक अधिकारको लागि औपचारिक तथा अनौपचारिक तवरले निरन्तर आवाज बुलन्द गर्दै सम्पूर्ण लिम्वुजातिहरु उपर भए्का उत्पीडन,दमन,शोषण,अन्याय,अत्याचार,भ्रष्टचार बिरुद्ध जन जागरण अभियान सञ्चालन गर्दै सम्पूर्ण लिम्बु दानुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई जनचेतना गराउने कार्यहरु गरीरहेको छ । आफ्नो मौलिक हक सहि सदुपयो गर्न वा अवसरवादी तत्वहरुले उनीहरुको स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गर्न नसकुन भन्ने अभिप्रायले सम्पूर्ण लिम्बुजन्य समुदायसंग यस महान कार्यको सफलताको लागि हातेमालो गर्दै हाम्रो मोर्चाको विधान तथा केन्द्रको निर्देशन पालना गर्दै सामान्य प्रशिक्षण देखि विविध मनोरञ्जन कार्यक्रहरु,बिबिक्यू कार्यक्रम,अन्तक्रिर्या कार्यक्रम देखि बिचार गोष्ठी तथा बुद्धिजीबी परिषद सम्म गठन गरि ग्रास लेभल देखि बौद्धिक लेभल सम्मका बृहत जनसमुदायलाई समेट्ने प्रयास गर्दै प्रवास मै भएर पनि नया जोस जाँगरका साथ शसक्तरुपले अगाडी बढीरहेछ ।
७.नेपालको लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चा र हङकङको मोर्चासंग के कस्तो सम्वन्ध रहि आएको छ ?
नेपालको लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चा र हङकङको लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चा एउटै हो । नेपालेको लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चा केन्द्र हो । भने लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चा हङकङ प्रवासको शाखा हो । यी दुबै एउटै भएकोले निती तथा कार्यक्रम,विधी विधान पनि एउटै हो र यो शाखा केन्द्रबाट निर्देशित तथा परिचालित हुन्छ । मात्र यो स्थानको फरक हो । तसर्थ एउटै भएको कारणले केन्द्र र शाखाको सम्बन्ध बडो सौहार्द्रपूर्ण छ । शाखाले चाहे अनुसारको आवश्यक संसाधना बौद्धिक खुराक,सरसल्लाह देखि प्रशिक्षण साथै नेपालका ताजा समसामयिक घटना शाखालाई सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्यहरु केन्द्रबाट भइरहेको छ । त्यस्तै प्रवास शाखाले पनि आफ्नो क्षमता र औकातले भ्याए सम्म प्रबासबाट गर्न सकिने गतिबिधीहरु सञ्चालन गर्दै केन्द्रको निर्देशन अनुसार राजनैतिक अभियानका साथ अर्थ सहयोग पनि रहेको छ । त्यसैले यी दुर्इ मोर्चा बिच आत्मियताको सम्बन्ध वा भातृत्वको न्यानो सम्बन्धका साथ नया युगको नया मोर्चाको नारामा घनिष्टता राख्दछ ।
८.एकिकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी ) संग लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चा सम्बद्ध भएर अगाडी बढी रहेको छ के यो मोर्चा माओवादी कै निति नियममा बाधिएर अघि बढ्ने राजनैतिक मोर्चा हो ?
लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चा एकिकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी ) को निति नियममा बाधिएर अगाडी बढीरहेको जस्तो आभाष देखिएता पनि यथार्थमा यो सम्पूर्ण तवरले सत्य होइन तर पूर्णरुपले असत्य पनि होइन । लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चाले लिम्बुजातिको उत्पीडन शक्तीको लागि जुन राजनैतिक अधिकार र जुन सवालहरु सशक्त उर्ठाई रहेको छ । ति कुराहरु एकिकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी ) ले मात्र सम्वोधन गर्न सकेको छ । वास्तब मै भन्ने हो भने नेपालमा वास्तविक क्रान्ति वा मुक्ती जनजातिहरुले नै गर्नु पर्दछ । यस देशको बहुसंख्यक जनजातिरुलाई तिरस्कार गरेर यो देशको उन्नति हुनेवाला छैन । बिश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको दौडानमा अहिले सम्म पनि यो बहुसंख्यक जनजातिहरुलाई गौण सम्झी बर्गीय मुक्तीलाई मात्र प्राथमिकता दिनु नै नेपालका कम्युनिष्टहरुको असफलता हो । त्यसैले यो यति लामो कम्युनिष्ट आन्दोलनको असफलता पाश्चात वास्तबिक समस्या के रहेछ भन्ने कुरा सहि बिश्लेषण गर्दै एकिकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी ) ले वर्गको साथै जातिय सवाललाई सम्वोधन गर्न नसकिए नेपालमा क्रान्ति सफल नहुने बिश्लेषण गर्दै उसले आम आदिवासी जनजाति लगायत जातिहरुको समुष्ट र सहि सम्वोधन गर्दै नेपाली भूभागमा अवस्थित सम्पूर्ण नेपाली वसोवासीहरुलाई समान पहुँच,समान अधिकार र समान हैसियतमा रहुन् भन्ने अभ्रि्रायले पिछडीएका जातिहरु उपर एकिकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी ) ले जोडतोडका साथ आवाज उठाएको हुनाले साथै हाम्रो चाहना पनि त्यहि भएकोले हामीले उठाउनु पर्ने बृहत एजेण्डाहरु एक प्रमुख राजनैतिक पार्टीले उठाएको हुनाले उसले उठाएको एजेण्डा र हामीले उठाएको एजेण्डामा तात्विक अन्तर नदेखिएकोले लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चा र एनेकपा माओवादी एउटै जस्तो देखिएको मात्र हो । लिरामुमो र एनेकपा माओवादीको अधिकांश एजेण्डाहरु (नागरिक सर्वोच्चता,राष्ट्रिय स्वधिनता,गणतन्त्र,संघियता) आदि कुराहरुमा सहमत छौं । यसमा अग्रगामी परिवर्तनको लागि जहा सम्म हुन्छ त्यहा सम्म मुल्य चुकाउन तयार हुनेछ । तर यसो भन्दैमा लिरामुमो पुरापुर माओबादी चाहीँ होइन । लिरामुमो एक जातिय मोर्चा भएकोले यसको आफ्नै अस्तित्व र ब्याख्याहरु छन् । जुन अस्तित्व र ब्याख्याहरुमा एनेकपा माओवादीले सम्वोधन नगरेको खण्डमा वा तिरस्कार गरेको खण्डमा हामीले आफ्नो अस्तित्व र पहिचानको लागि एनेकपा माओवादीसंग टाँसी रहनु पर्ने अवस्था चाहीँ छैन । यसर्थ लिरामुमो एउटा विशुद्ध जातिय मोर्चा हो । तर अन्य जातिवादी,उग्र जातिवादी मोर्चा चाहीँ होइन । वर्तमान २१सौँ शताब्दिको आधुनिकतालाई आत्मसाथ गर्दै,वस्तुस्थिति अनुकुल,समयसापेक्ष,वैज्ञानिक दृष्टिकोण अवलम्बन गर्ने एक उत्कृष्ट लिम्बुवानी जातिय मोर्चा हो ।
९.तपाई लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चाको प्रवास समिति हङकङमा आवद्ध हुनुको प्रमुख कारण के हो ? अरु लिम्बुवान पार्टीहरु पनि त छन् नी ?
लिम्बुवानमा धेरै लिम्बुजन्य संघ संगठन तथा मोर्चाहरु छन् । यो आफैमा मेरो दृष्टिकोणले नराम्रो चाहीँ होइन । किनकी हामी लिम्बुहरु वा हाम्रो लिम्बुवान नेपालकै जातिहरु मध्ये कम कज्याइएको क्षेत्र तथा जातिहरु हुन् । यसर्थ आफ्नो गुमेको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि हामी सम्पूर्ण तवरले सम्पूर्ण क्षेत्रबाट सम्पूर्ण लिम्बु तथा लिम्बुवानवासीहरु तदारुकताका साथ लाग्नु पर्दछ , उठ्नु पर्दछ , गुमेको अधिकार खोज्नु पर्दछ , अनुनय गरेर नपाए खोस्नु पनि पर्दछ । तसर्थ ए देखि जेट् लेभल सम्मका लिम्बुहरु जाग्नु पर्दछ । राजनैतिक सुझबुझ हुनु पर्दछ । यहि अभ्रि्रायले राजनैतिक जागरणको अभियानमा यहाँ विभिन्न थरिका लिम्बुजन्य संगठन,मोर्चाहरु खोलिएका छन् जस्ले परोक्ष अपरोक्षरुपमा लिम्बुवान निर्माणमा २,४ इट्टा थप्ने काम गरेकै जस्तो लाग्छ । जहाँ सम्म आशा लाग्छ उत्पडिीत जातिहरुर्,वर्गहरु कहि न कतै राजनैतिक जागरणमा लागुन् । जो राजनितीको सुझबुझ तिर लाग्छ , उसले कुनै न कुनै दिन नितीको सहि तथ्य पत्ता लगाउने छ । समय लाग्ला तर सत्य सत्य नै सावित भएर छोड्छ । तसर्थ मेरो भन्नुको तार्त्पर्य नेपालमा धेरै लिम्बुजन्य मोर्चाहरु छन् म उनीहरुको विरोधी होइन समर्थक नै हो । तर समर्थक भन्दैमा अन्धजातिवादी भएर होइन, अहिलेको युग अनुकुल वर्तमान अवस्थाको माग र आवश्यकता अनुसारको परिवर्तनकामी प्रगतिवान क्रान्तिकारी र उन्नत मोर्चा वा लिम्बुवान संगठन नै मेरो रोजाइ हो । यी माथि उल्लेखित भएका मेरा बिचारहरु लि.रा.मु.मो.ले मात्र अवलम्बन गरेको हुनाले अन्य मोर्चा भन्दा यो मोर्चा उत्कृष्ट,बृहत अग्रगामी र वैज्ञानिक भएकोले अन्य मोर्चाको अलवा यस मोर्चामा आवद्ध भएको हुँ ।
१०.राजनैतिक मोर्चामा लागेर अघि बढ्दा घर परिवारको सरसहयोग कतिको पाउँनु भएको छ ?
मैले परिवारबाट राम्रै सहयोग पाइरहेको छु । यस राजनैतिक मोर्चाको लागि विशेष परिस्थिती वाहेक मैले चाहे अनुसारको समय मेरो परिवारबाट सहयोग र सहानुभूति नै रहेको छ । जस्मा मेरो परिवारलाई धन्यवाद टक्राउदछु । तर बिचारणिय कुरो के हो भने पहिलो कुरा हामी परिवारप्रति इमान्दार हुनु पर्यो ,कर्तब्यनिष्ठ हुनु पर्यो । वास्तविक समस्याको सहि पहिचान गरी समाधान गर्नु पर्यो,परिवारलाई आफुले गरेको कार्यहरु सहि छ सत्कर्म छ भनेर आफ्नो विषय,बिचारहरु प्रति सकेसम्म प्रशिक्षित गराउनु पनि पर्दछ । अर्को कुरा तपाई हामीमा सहि इच्छाशक्ति पनि हुनु पर्यो । सहि इच्छाशक्ति भएको खण्डमा हामीलाई सामान्य कुराले शायदै छेक्दैन । तसर्थ यी सम्पूर्ण तवरको समुचित संयोजन हामीले अवलम्वन गर्यौ भने परिवारबाट सकारात्मक नै सहयोग मिल्ने छ र मलाई पनि मेरो घरपरिवारबाट यसरी नै सहयोग मिलेको छ ।
११.जीवन र राजनितिलाई कसरी विश्लेषण गर्नु हुन्छ ? अथवा यसप्रतिको दृष्टिकोण तपाईको के हो ?
मेरो विश्लेषणमा जीवन भनेको जन्म देखि मृत्यु सम्मको उपलब्धि हो । यस अवधि भित्र मानवले धेरै उत्तारचढाव,आरोह अवरोह झेलेको हुन्छ । केहि केहि मानव सुखी होलान् केहि दुखि होलान् तथापी यो सवै जीवन नै हो । तर्सथ यी सुखदुखको सम्पूर्णताको जोड घटाउको समस्तरुप नै जीवन हो जस्तो लाग्दछ । जीवन पाश्चातको चिन्तन वा सोचको परिणाम नै राजनिती जस्तो लाग्दछ । मानवको आफ्ना आफ्नै सोचहरु हुन्छन् । धार्मिक ब्यक्तिहरु धर्मसंगै उनीहरुको जीवन अन्तरनिहित हुन्छ भने राजनैतिक ब्यक्तिहरु राजनितीसंगै उनीहरुको जीवन अन्तरनिहित हुन्छ । जहाँ सम्म मेरो सवालमा छ,म मेरो जीवनलाई एउटा राजनैतिक प्राणीको रुपमा लिनु नै उत्तम लाग्दछ । किनकी राजनितीमा मात्र यस्तो अस्त्र हो जुन अस्त्रले मात्र समाज,देश,विश्वमा विशाल परिवर्तन गर्न सक्दछ । वर्तमान विश्वमा जति पनि ठुल्ठुला परिवर्तन र बिकासहरु भएकाछन् ति परिवर्तन र विकास राजनितीले प्रत्यक्ष सरोकार राखेको हुन्छ । एकातिर विश्वमा विसाल परिवर्तन रर विकास यहि राजनितीले भएका छन् भने हाम्रो जस्तो नेपालमा न परिवर्तन नै हुन सकेको छ न बिकास नै हुन सकेको छ । अझ त्यसको विपरित चरम सामाजिक विभेद,चरम आर्थिक असमानताका भयानक खाल्डाहरु निर्माण भएका छन् । यी आर्थिक असमानताका खाल्डाहरु पुर्न सामाजिक विभेदका पर्खालहरु भत्काउन विद्यमान देशमा रहेका उत्पीडन,शोषण,भ्रष्टचारको अन्त गर्न २,४जनाले मात्र सम्भव छैन । तर्सथ यी विशाल समस्याका पर्खालहरु ध्वस्त पार्न तपाई हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीवहिनी सबै एक ढिक्का भएको खण्डमा मात्र सम्भव छ । त्यसैले हाम्रो नेपाल उच्च बनाउँनु छ भने हामी सबैले राजनिती गर्नु पर्दछ वा न्युनतम सुझबुझ राख्नै पर्दछ भन्ने मेरो राजनैतिक दृष्टिकोण हो । तर यहाँ एउटा विचारणिय कुरा के छ भने हाम्रो राजनिती बुर्जुवा,सामन्ति,पुरातन सोच र यथास्थिती सोचको नभई सच्चा राजनिती हुनु पर्दछ । जस्ले अहिलेको आधुनिकतालाई आत्मसाथ गर्दै सम्वोधन गर्न सक्ने हुनु पर्दछ ।
१२.हाल नेपालमा संघीय लिम्बुवानको अवधारणा विभिन्न लिम्बुवानी पार्टी र अन्य राजनैतिक पार्टीहरुले पनि एजेण्डाको रुपमा उठाएकाछन् यसमा तपाई कतिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
नेपालमा संघीय लिम्बुवानको अवधारणा तथा माग लिम्बु जन्य संघ,संगठन,मोर्चा देखी ठुला राजनैतिक दलहरुले समेत उठार्इरहेका छन् कतिले त आफ्नो एजेण्डा कै रुपमा उठार्इरहेका छन् । यो सवल पक्ष हो तर यहाँ विचारणीय कुरा के छ भने यो राजनैतिक पार्टीहरुको केवल देखाउने दाँत मात्र हो की साँच्चै खाने दाँत नै हो समयले देखाउने छ । किनकी लिम्बुवानी संगठन,मोर्चाहरु अहिले सम्म आलो काँचो नै छन् । यस्तो अपरीपक्क अवस्थामा सही दर्शन र सहि गतिको अभाव रहनु स्वभाविकै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अवसरवादीहरुले उनीहरुको स्वार्थ अनूकुल प्रयोग गर्दछन् । लिम्बु लिम्बु बिच षड्यान्त्र गरि भिषण टकराव सिर्जना गरिदिन्छन् । फलत लिम्बुवानमा लिम्बुहरुको शक्ति छिन्नभिन्न बनाई आफ्नो अनूकुल स्वार्थसिध्द गर्नु हो । एकातिर लिम्बुवानमा लिम्बु जन्य मोर्चा पार्टीको अवस्था यस्तो छ भने अर्कोतिर लिम्बु जन्य व्यक्तित्वहरुको राज्यको उच्चतह,राज्य संयन्त्रहरुमा नितिनिर्माणमा,शक्ति प्रयोग गर्ने ठाउँहरुमा,प्रशासनिक क्षेत्रमा,सैनिक उच्चतहहरुमा उपस्थिती छदै छैन । यस्तो स्थितीमा सम्पूर्ण राज्य सत्ताको चावी त्यहि लिम्बुवान (संघीय) को विरोधीको हातमा भएकोले लिम्बुवानको ग्यारेण्टि हुन्छ भन्नु निक्कै कठीन छ । तर वास्तविकता केहि भने नचाहेर पनि मन नलाग्दा नलाग्दै पनि ती तत्वहरुले लिम्बुवानको आवाज र शक्तिलाई बिश्लेषण गरेर लिम्बु र लिम्बुवानको मागलाई सम्बोधन गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्दछ । र लिम्बुवानी संघ,संगठन,मोर्चा,पार्टीहरुले निरन्तर खवरदारी गरी रहयौं भने निश्चित रुपमा संघीय लिम्बुवानको सुनिश्चिततामा म आशावादी नै छु ।
१३.तपाईलाई जीवनमा नगरी नहुने काम के लाई ठान्नु हुन्छ ? अथवा कुन काम बढी गरौं जस्तो लाग्छ ?
मलाई जीवनमा नगरि नहुने भन्दा पनि बढी गरु जस्तो लाग्ने विषय चाहीँ राजनिति नै हो । किनकी मेरो जीवनको यहाँ सम्मको विश्लेषण गरे अनुसार संसारमा अति बिकसीत देखि अति बिकसीत देशहरु छन् । बिकसित देशहरुमा सम्पूर्ण राज्य श्रोतका संसोधनहरु निश्चित उचित प्रकृयाबाट परिचालित हुन्छ , जस्ले त्यो देशको हरेक क्षेत्रमा अग्रगति लिएको हुन्छ । यो सिस्टम राम्रो परिचलन नगरेको खण्डमा देशको उधोगति लिने छ भन्ने मेरो विश्लेषण हो । यो सम्पूर्ण सिस्टमहरुको निती निर्माण परिचालन सहि राजनितिले मात्र दिशा निदिष्ट गर्ने भएकोले देश बिकासको सबै भन्दा प्रमुख तथा महत्व पूर्ण औजार राजनिति नै हो । यो कारणले मलाई अन्य बिषय भन्दा राजनिति नै गरौ जस्तो लाग्दछ ।
१४.हालैको नेपालको राजनैतिक गतिविधीलाई कसरी हेरी रहनु भएको छ ?
बर्तमान नेपालको राजनितिलाई बिश्लेषण गर्दा दुर्इ राजनितिक खेमा वा दुर्इ राजनितिक बिचारको ध्रुबिकरण भई रहेको महसुस गर्दछु । एउटा खेमा पुरानै मनोब्यक्ति,पुरानै सोच मुल्य मान्यतामा आधारित रहेर यथास्थीति मै क नेपालको भूमण्डललीलाई राख्न चाहान्छ भने अर्को खेमा यी चिन्तन र सोचबाट अमुल परिवर्तन गरी अग्रगमी बैज्ञानिक शैलीमा नेपालको भूमण्डलीलाई लान चाहान्छ । तर यहा बास्तबिकता के हो भने यो बिपरित ध्रुबका राजनैतिक शक्तिहरुको कठोर घर्षण र उत्तर चढाब ले एक दिन न एक दिन एउटा त्यहा यस्तो मिलन बिन्दु फेला पर्नैछ ,जुन बिन्दु सन्तुलनको बिन्दु वा साझा बिन्दु हुने छ । अहिले सम्मको राजनैतिक कठिन तथा बिषम मोड त्यहि मिलन बिन्दुबाट सहमति र सहकार्य सुरु हुनेछ भन्ने कुरामा म बिश्वस्त छु ।
१५. लिम्बुवान ब्लग मार्फत बिश्वभरि छरिएर रहेका पाठक तथा शुभचिन्तकहरुलाई केहि शन्देस दिन चाहनु हुन्छ कि ?
सर्बप्रथम त मेरो बिचार तथा भावना बिश्वका सम्पूर्ण नेपाली दाजु तथा दिदी बहिनीहरुलाई सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनु भएकोमा लिम्बुवान ब्लगस्पोट डटकम तथा तपाई ब्लगर टंक सम्बाहाम्फे ज्यूलाई हृदय देखि नै धन्यबाद दिन चाहान्छु । साथै बिश्वमा छरिएर रहेका आदरणिय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई के भन्न चाहान्छु भने २१सौं सताब्दीको बैज्ञानिक र आधुनिक युगमा बिश्व कहाँ पुगी सक्यो तर हामी नेपालीहरु दिनानु दिन अझ तल तल झरीरहेका छौ । बिश्व सामु हाम्रो उचाई दिनानु दिन घटिहेको छ । दिनानु दिन नाक खुम्चिरहेको छ यो अबश्य हाम्रो सवल पक्ष होईन । तसर्थ हामीले हाम्रो नेपालको गौरबता राख्नु छ भने, गौरबशाली नेपाली बन्नु छ भने नेपाली पहिचान सहित बिश्व सामु शिर ठाडो पार्नसक्नु पर्दछ । त्यसैले हामी बिश्वभरी छरिएर रहेका नेपालीहरु जहाँ जतै बसे पनि आफ्नो देश,आफ्नो क्षेत्र मातृभूमीको माया गरौ । हामी सबैको संगालोले मात्र यी कुराहरु सम्भब छ । तसर्थ हामी दिशा बिहीन कतै अलमलिएर चौबाटोमा छौ भने पनि सहि बाटोको पहिचान समय मै रोज्न सिकौ र हिडौ भन्ने आपेक्षा राख्दछु । धन्यबाद । आसेवारो ।
Posted by limbu at 8:01 AM